သူမကို ရစရာမရှိအောင်သိက္ခာချထားတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဖွင့်ချရင်းပေါ်တင်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာလောက ကနေအပြီးတိုင် အနားယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီအစ်မတွေနဲ့အတူ ဖွင့်ထားတဲ့ ပိုးထည်ဆိုင်ကို ဦးစီးနေပြီး ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ကလည်း အနုပညာ မလုပ်တော့ပေမယ့် လည်း ဒါဒါကို အခုချိန်ထိ ချစ်ခင်အားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဒါတစ်ယောက် လတ်တလောမှာ စိတ်သောက ရောက်စရာ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမကိုရစရာမရှိအောင် ဂုဏ်သိက္ခာချထားသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရက်တွေကို တစ်ခုမကျန် ဖွင့်ဟ ပြောပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ပြန်လာခဲ့စမ်းပါ …ပြန်လာမယ့်နေ့ ကို ငါ သိမှာ ကြောက်စရာမလိုဘူး ( မဟုတ်တာမလုပ်ထားရင်ပေါ့ )ကိုယ်က မမှန်ကန်ပဲ … တစ်ပါးသူကို သိက္ခာချထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှာ သွေးပျက်နေပြီလား 😏အခုတော့ လူမွဲစာရင်းခံ ၊ တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ပြောင်းပြေး .. ( ဘောင်ကျဉ်းသွားပြီဆိုတော့လေ )ကိုယ့်ပြုသည့်ကံ ကိုယ့်ထံပြန် လာနေပြီပေါ့..ပြန်လာခဲ့စမ်းပါ …မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်တာလုပ်ထားတာတွေအများကြီးကို နေ့/ည မအိပ် ၊ နှလုံးဆေးတွေ ၊ အိပ်ဆေး တွေ သောက်ပြီးပြန်စဉ်းစား …. ပြီးရင်တော့ ပြန်လာခဲ့ပါဦး 😂🔸Page မှာတင်မှ သူတို့ မြင်မှာမို့ ချစ်တဲ့သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်နော် 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🔸” ဆိုပြီး ရေးသားထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ စိုးမွတျနန်ဒာကတော့ နောကျအိမျထောငျပွုပွီးနောကျပိုငျး အနုပညာလောက ကနအေပွီးတိုငျ အနားယူသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ညီအဈမတှနေဲ့အတူ ဖှငျ့ထားတဲ့ ပိုးထညျဆိုငျကို ဦးစီးနပွေီး ဘဝကိုအေးခမျြးစှာဖွငျ့ ဖွတျသနျးနတော ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး အနုပညာ မလုပျတော့ပမေယျ့လညျး ဒါဒါကို အခုခြိနျထိ ခဈြခငျအားပေးနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဒါတဈယောကျ လတျတလောမှာ စိတျသောက ရောကျစရာ ကိစ်စတဈခုနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျက စိုးမွတျနန်ဒာရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ ပို့ဈတဈခု တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ သူမကိုရစရာမရှိအောငျ ဂုဏျ သိက်ခာခထြားသော မိတျဆှတေဈဦးရဲ့အောကျတနျးကတြဲ့ လုပျရကျတှကေို တဈခုမကနျြ ဖှငျ့ဟ ပွောပွလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
” ပွနျလာခဲ့စမျးပါ …ပွနျလာမယျ့နေ့ ကို ငါ သိမှာ ကွောကျစရာမလိုဘူး ( မဟုတျတာမလုပျထားရငျပေါ့ )ကိုယျက မမှနျကနျပဲ … တဈပါးသူကို သိက်ခာခထြားတဲ့ ကိစ်စတဈခုမှာ သှေးပကျြနပွေီလား 😏အခုတော့ လူမှဲစာရငျးခံ ၊ တဈမွို့ပွီးတဈမွို့ပွောငျးပွေး .. ( ဘောငျကဉျြးသှားပွီဆိုတော့လေ )ကိုယျ့ပွုသညျ့ကံ ကိုယျ့ထံပွနျ လာနပွေီပေါ့..ပွနျလာခဲ့စမျးပါ …မွနျမာပွညျမှာ မဟုတျတာလုပျထားတာတှအေမြားကွီးကို နေ့/ည မအိပျ ၊ နှလုံးဆေးတှေ ၊ အိပျဆေး တှေ သောကျပွီးပွနျစဉျးစား …. ပွီးရငျတော့ ပွနျလာခဲ့ပါဦး 😂🔸Page မှာတငျမှ သူတို့ မွငျမှာမို့ ခဈြတဲ့သူတှေ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈသှားရငျတောငျးပနျ ပါတယျနျော 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🔸” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။